Iyo Apple Watch yakatonga musika we smartwatch mukota yekupedzisira | Ndinobva mac
Iyo Apple Watch yakatonga musika we smartwatch mukota yekupedzisira
Kusvika nanhasi, zvinogona kusashamisa chero munhu kuti Apple Watch ndiyo inonyanya kutengeswa pasi rese, kunyangwe ichingoenderana nePhones, kusiyana nemamwe mawatchwatches ari pamusika kuti kana achienderana nemidziyo yese pamusika, zvese iOS uye Android.
Kubva Cupertino ivo havasati vambozivisa manhamba ekutengesa echinhu ichi, seAirPods, saka isu tinofanirwa kuvimba nekuongororwa kunoitwa nemakambani akaita seIDC, App Annie, Counterpoint Research nevamwe. Chirevo chazvino chinoratidza kutengesa kweApple Watch pasirese, zvinoratidza izvo Apple inoramba ichitonga pamusika.
Uyu mushumo uchangoburwa, wakasainwa neCounterpoint Research unoti Apple yakawedzera huwandu hwekutumira panguva ye2020 ne6% zvichienzaniswa nenguva yakafanana yegore rapfuura. Izvi zvinomiririra kuwedzera kwemugove wemusika we2% uchienzaniswa ne2019 nenzira iyi, Apple Watch ine 28% chikamu chemusika chewadhi dzakapfava zvichienzaniswa ne26% yayaive nayo panguva ino.
Asi kana tichitaura nezvemari, tinofanira kutaura nezvazvo 2.300 mamiriyoni emadhora iyo Apple yakagadzira kuburikidza nekutengesa kwemhando dzakasiyana dzeApple Watch. Sezvakataurwa neComputerpoint Ongororo:
Panyaya yekutengesa, chinzvimbo chaApple chakatosimba. Muchikamu chechitatu, yakasvika $ 2.300 bhiriyoni, ingangoita hafu yekutumirwa kwepasi rose smartwatch uye ne18% kuwedzera panguva imwecheteyo gore rapfuura.
Samsung yakanga yamira muhafu yekutanga ye2020. Sezvo ichikwezva vashoma vashoma veprimamu kana ichienzaniswa neApple, kudiwa kubva pachigadziko chayo kwaive kusimba panguva yedenda. Asi yakadzokazve mukota yechitatu nekuvhurwa kweiyo Galaxy Watch 3. Nezvemari, Samsung yakakura 59% pagore uye inotarisira kuwedzera kwakanaka ikozvino.
Zvakare, zvese China neNorth America ndiyo nyika izvo vakadhonza mota kugadzira yakawanda yemari inowanikwa kubva kuApple Watch kutengesa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Iyo Apple Watch yakatonga musika we smartwatch mukota yekupedzisira
"Extrapolations" inyaya yekushandurwa kwemamiriro ekunze iyo inotanga kuratidzwa paApple TV +
Aya ndiwo ekutanga ongororo eAirPods Max